ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ချွေးပေါက်ဆိုတာ အရေပြားပေါ်က အပေါက်သေးသေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားအောက်က ချွေးနဲ့ အဆီဂလင်းတွေဟာ ဒီအပေါက်ကလေးတွေကတဆင့် ချွေးတွေ အဆီတွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးရပါတယ်။ ဒီချွေးပေါက်ကလေးတွေဟာ အသားအရေလှပရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့ နေရာက ပါဝင်နေပါတယ်။ တချို့လူတွေမှာ ချွေးပေါက်တွေက ပုံမှန်ထက် ပိုကျယ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ ပုံမှန်ထက် ပိုအဆီပြန်တဲ့ အသားအရေတွေ ဖြစ်စေတာပေါ့။
?ချွေးပေါက်ကျယ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ ??
– အဆီများတဲ့ မိတ်ကပ်တွေ
စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် ချွေးပေါက်တွေကျယ်လာစေပါတယ်။
?ချွေးပေါက်ကျယ်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ??
– မိမိသုံးနေတဲ့ skin care တွေကို ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ အဆီအခြေခံတဲ့ မိတ်ကပ်တွေရှောင်ပါ။ ဝက်ခြံနဲ့ အဆီပြန်ခြင်းအတွက် အဓိကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို အကြာကြီးစွဲသုံးတာမျိုးရှောင်ပါ။ အသားအရေ အလွန်ခြောက်သွေ့လာတဲ့အခါ အဆီဂလင်းတွေက အဆီတွေကို နဂိုထက်ပိုထုတ်ပေးလာနိုင်တာကြောင့် ပိုဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။
– မျက်နှာပုံမှန်ဆေးကြောပါ။ အဆီပြန်တဲ့အသားအရေအတွက် Gel type မျက်နှာသန့်စင်ဆေးတွေနဲ့ ပိုသင့်တော်ပြီး အဆီမပြန်သူတွေကတော့ ခရင်မ်အမျိုးအစားတွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Scrub type မျက်နှာသန့်ဆေးတွေကတော့ ချွေးပေါက်တွေပိုကျယ်စေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကတော့
– မအိပ်ခင် မိတ်ကပ်ဖျက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
– ရွှံ့စေး ပါဝင်တဲ့ mask တွေနဲ့ ပေါင်းတင်ပါ။
– ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေဖို့ ဂရုစိုက်ပါ။
– နေရောင်ကာခရင်မ် နေ့စဉ်လိမ်းပါ။
– အသားအရေအစိုဓာတ် ထိန်းသိမ်းဖို့ moisturizer မှန်မှန်သုံးပါ။
– သိပ်ဆိုးလာရင် အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသပါ။